कलाकार धनी हुनलाई देश धनी हुनुपर्छ
काठमाडौं– चार महिनाअघि लन्डनको वेम्बले एरेनामा कन्सर्ट दिएर एउटा उपलब्धि बनाउन सफल सांगीतिक ब्यान्ड नेपथ्य शुक्रबारदेखि स्वदेशकै भ्रमणमा निस्किँदैछ। नेपालयको आयोजनामा हुन लागेको "शान्तिको लागि शिक्षा" टुर रत्ननगर चितवनबाट सुरु भई पुस १४ का दिन ललितपुर पाटनमा टुंगिनेछ। विराटचोक, दमक, लालबन्दी, तौलिहवा, गुलरिया, लमही, आँबुखैरेनी, बेनी, गगनगौडा पनि पुग्ने नेपथ्यका गायक तथा अगुवा अमृत गुरुङसँग कुराकानीः
तपाईंले द्वन्द्वकालमा पनि देश घुम्नुभएको थियो, दुई वर्षअघि पनि घुम्नुभयो। माहौलमा कतिको बदलाव आएको छ?
माहौल निकै फरक भइसक्यो। त्यो बेला आफूलाई बोल्न मनलागेको बोल्न पाइँदैनथ्यो। जाना मन लागेको ठाउँमा जान पाइँदैनथ्यो। १० जनाभन्दा बढी जमघट नै हुन दिँदैनथ्यो। अहिले त खुकुलो भइसक्यो।
अहिले द्वन्द्व र कलह हटेको छ त?
मुख नबिसाए पनि हतियार बिसाइएको अवस्था हो अहिले। द्वन्द्वकालमा मान्छेको लाश काठको मुढासरह गन्ती हुन्थ्यो। आखिर जो मरे पनि नेपाली मरिरहेको थियो। अहिले जनताले सोचेको कुरा परिपूर्ति नभए पनि समाज शान्तितिर अगाडि बढिरहेकै छ।
अनि यो "शान्तिको लागि शिक्षा" टुर चाहिँ किन गर्दै हुनुहुन्छ?
धेरै कुरामा परिवर्तन आए पनि विद्यालयमा राजनीति गर्ने परिपाटी हटेको छैन। विद्यार्थी र शिक्षकलाई राजनीतिमा उपयोग गरिन्छन्। त्यसैले यो टुरको सान्दर्भिकता उत्तिकै छ।
गीतबाट सामाजिक जागरणमा सक्रिय हुने प्रेरणा कतैबाट पाउनुभएको हो कि?
राल्फा समूह पनि एक जमानामा यसरी हिँड्थ्यो। राजनीतिक विचारधारा फरक भए पनि हामी त्यो समूहबाट अलिअलि प्रभावित छौं भन्न सकिन्छ। त्यसबाहेक समाजमा फैलिएको हत्याहिंसाले पनि हामीलाई प्रेरित गरेको हो।
तपाईंले गाउन थालेको २२ वर्ष भइसक्यो, श्रोताहरु पक्कै नयाँनयाँ पाइरहनुभएको होला?
हो, पहिले साथीहरु हाम्रा गीत सुन्थे। त्यसपछि उनीहरुका छोराछोरीले सुन्न थाले। हेरौं अब, कुन दिनसम्म श्रोताहरु हामीलाई सुन्न आउनेछन्?
टुरको क्रममा गीत गाउनेबाहेक अरु के काम गर्नुहुन्छ?
टुरमा हिँड्दा त कार्यक्रममै ध्यान केन्द्रित हुन्छ। तैपनि मिलेसम्म स्थानीय गीतहरु सुन्नेगर्छु। नयाँ गीत सुन्न पाउँदा सौभाग्य नै ठान्छु।
एघार ठाउँमा दिइने कन्सर्ट एकअर्कामा भिन्न हुन्छ र?
केही हिट गीतमात्र दोहोरिने हो। नत्र हामी ठाउँअनुसार गीत फरकफरक सुनाउनेछौं। हाम्रो उद्देश्य दर्शकश्रोतालाई सन्तुष्ट बनाउनु हो, गीत दोहोर्‍याउँदा यही विचार गछौं। हामीलाई दर्शकको भीड उस्तैउस्तै लाग्नसके पनि दर्शकहरुलाई हामी नयाँ लाग्छ नि!
सामाजिक जागरणका लागि यस्तो टुर कहिलेसम्म निरन्तरता दिने योजना छ?
कहिलेसम्म जाने भन्ने कुनै निश्चित टुंगो नै छैन। किनभने संसार र समाज भएसम्म गाह्रो–अप्ठेरो भइरहन्छ, जागरणमूलक कार्यक्रमहरु आवश्यक परिरहन्छ।
नेपथ्यले गीत गाएर पैसा निकै कमाएको होला नि?
गीत गाएर कलाकार धनी हुनलाई पहिले देश धनी हुनुपर्छ। देश गरिब हुँदा कलाकार पनि गरिब नै हुन्छ।
देशलाई कसरी धनी बनाउने त?
शिक्षा र शान्तिले नै देशलाई धनी हुने दिशातिर धकेल्छ।